Symbology na psychoanalysis na Poe's Fall of House of Usher | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Symbology na psychoanalysis na Poe's Fall of House of Usher
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akụkọ, oké ụjọ
Da Uslọ Usher bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma mara ọrụ nke Edgar Allan Poe na oge obula na mgbe aghasiri na m aghaghachi na Boston onye isi egwu. N'isiokwu a, m nwetere akụkụ nke ndị ọzọ ọrụ kọleji na m ga-arụ ọrụ n'oge ya. Oge a bụ ihe edere site na ogologo oge akara na psychoanalysis edemede nke ọrụ. Otu mmasi na obere onyinye na onu ogugu nke nnukwu Poe.
2 Uslọ Usher
3 Usmụnna Usher
4 Onye na-emetụta uche
4.1 Akụkụ nke Bibliography eji mgbe ahụ:
Na onye mbu, onye na-akọ akụkọ na-akọghachi nleta ya na enyi ya bụ nwata, Roderick kpọtara, onye nwe ulo ulo obula di iche. Nwoke a na-arịa ọrịa ma gwa gị ka ị andụrịa ọ .ụ. Ya na nwanne ya nwanyị bi Nwanyi madeline, nke bukwa na-arịa ọrịa ya mere ọ na-enwe oke mwute.
Onye na-akọ akụkọ ahụ gafere otu oge ya na enyi ya na-arara onwe ya nye n'ikwu, ịgụ na ịge egwu. Ma otu ụbọchị Lady Madeline nwụrụ, Ma ọ bụ, ọ dịkarịa ala, ọ dị ka. Ha ga-ahapụ ya n'ime igbe ozu, n'ime ụlọ dị n'akụkụ ala nke ụlọ ahụ.
Site n'ebe ahụ Roderick Usher ga-eji nke nta nke nta tufuo isi ya na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa ruo otu abalị oké ifufe ọ na-amalite iwe iwe nke ukwuu mgbe ọ chere na ọ nụrụ mba n’ụlọ niile. Iji mee ka obi sie ya ike, onye nkeda ahụ malitere ịgụ akwụkwọ ruo mgbe ọ nụrụ olu ndị ahụ, dị ka ịkwa ákwá na ịkwa ákwá. Roderick Usher, onye ara na-adịkarị, ghọtara nke ahụ ha liri ya na ndụ Ma nke ahụ bụ mgbe Lady Madeline ọ na-egosi ha, eziokwu na precipitates ọnwụ nwanne ya. Tupu nke ahụ na ụlọ na-achọ ịda onye obula n’ere gbapu n’azu mkpọmkpọ ebe na-emikpu n'ime ọdọ nke mpaghara gbara ya gburugburu.
Ọ dị mkpa iji mesie ya ike isi ọrụ nke ụlọ, ebe ọ bụ na mmetụta ya na ndị odide ahụ na ntụgharị dị oke mma. Ọzọkwa mmetụta na-adịghị mma nke ahụ na-akpata mmetụta ahụ na nke ahụ na-eduga n'ọnwụ nke ndị protagonists abụọ ahụ na mbibi nke ụlọ ahụ. A na - achọpụta ngwa ngwa ahụ na mbido akụkọ mgbe onye na - akọwa ya kọwara ọbịbịa ya na mmetụta nke iru uju na mwute na-emepụta ọhụụ nke nnukwu ụlọ ahụ.
N'ezie, na echiche mbụ a, e buru amụma banyere ọnwụ n'ihi na mgbe ị na-ele ụlọ na gburugburu ya anya, dịka ọdọ mmiri na osisi akọrọ, naanị ị nwere ike iwere ya ihe dị na njedebe nke iguzogide oge, dịka nke ndị bi na ya, ndị ikpeazụ abụọ Usher. Ọ bụ Nwanyị Madeline, nke e liri dị ndụ tupu oge ya, onye na-ebibi ụlọ ahụ, tupu oge ya, na ọnwụ nke nwanne ya nwoke, ka mmiri zoo ya niile n'ime ọdọ ahụ, dịka akụkọ ahụ si agwụ.
Agbanyeghị, ihe na - edozi ihe ndị a, dịka ọtụtụ mkpụrụedemede dịka ọnọdụ na gburugburu, bụ a prolongation nke ọnọdụ uche, nke uche Poe. Enwere ike ịhụ nke a na akara ngosi nke ụfọdụ n’ime ha, dịka, iji maa atụ, ụlọ. Ulo na n'ihi agwa ya na-egosipụta ya na aru mmadu na echiche.
N'ụzọ dị otú a, ndị facade ga-apụta na ụzọ, nkpuchi nke bu agwa mmadu n'okpuru ya. Ihe dị iche ala nwere ike ibu akara nke vetikal na oghere. na elu ụlọ na ala ga-ederịta akwụkwọ ozi isi na echiche, nke ahụ bụ, na ọrụ maara na iduzi. Kama nke ahụ, ihe okpuru ulo ma obu okpuru ulo ga-egosi el amaghị ihe ọ bụla na mmuo. na akwa ọkwa ga-abụ ụzọ nke njikọ nke ụgbọ elu uche dị iche iche na isi ihe ọ pụtara ga-adabere ma a na-ele ya anya na nrịgo ma ọ bụ na-agbadata.
Ihe doro anya bụ na enwere nha anya n'etiti ụlọ na ahụ mmadụ, ọkachasị na mmeghe. Ihe akaebe nke a bụ okwu nke onye na-akọ akụkọ mgbe ọ nọ n'ihu ụlọ Usher, na-akọwa windo ndị gbara ọchịchịrị ọ na-ahụ 'dị ka anya ojii na ihu efu".
Otu ihe ahụ na-eme na ọdọ mmiri ma ọ bụ mkpọmkpọ ebe. Ọdọ nwere ike igosipụta zoro ezo na ihe omimi. Ọzọkwa, na elu nke mmiri ya nwere ike gosiputa a mirror, ihe oyiyi nke eziokwu, eziokwu nke na-adaba na otu mmiri ahụ wee hapụ naanị mkpọmkpọ ebe. Ha nwekwara ike ịpụta ndị ahụ mmetụta ma ọ bụ ahụmahụ ndị dị ndụ na-enweghịzi njikọ dị mkpa mana ha ka na-adị n'agbanyeghị enweghị ojiji ma ọ bụ ọrụ n'ihe gbasara ibi ndụ ma ọ bụ iche echiche.
N'ihe metụtara ndị odide na ọnọdụ onye edemede dere dị ka onye na-ede akụkọ, nke a anaghị etinye aka na mkpebi siri ike na akụkọ ma ọ bụ akara aka nke ndị protagonists. Ọ dị ka Poe emeela ụfọdụ n'ime mgbagwoju anya ya itinye ya ma ọ bụ, kama ịtụgharị uche na ya, na Roderick na Madeline, karịsịa na nke mbụ.
Ọ dị n'ụzọ nkịtị emeghe ma akụkụ ọzọ ahapụwo, dịka onye na-ekiri ihe na-emenụ. Ọrịa Roderick na mgbaka bụ Poe na, na-ekele ya ma ọ bụ site na anya ya, ha nwere ike ịpụ n'èzí, nwere onwe ha ma kwụsị ịbụ ibu maka onye edemede ahụ.
Lady Madeline ga-egosipụta adịghị ike nke mmụọ ya. Ọ ga-abụkwa ụdị nne ya nke ahụ na-apụta ma na-apụ n'anya site na paseeji ụlọ ahụ, site na uche Poe, iji nwetaghachi ndụ na-enweghị ihe ịga nke ọma. Mgbanwe niile nke akụkọ a ga-adakwasị Lady Madeline ma ọ bụ chọọ nne furu efu.
Onye na-emetụta uche
Ma enwekwara a mgbapụ ọnwụnwa, nke nzọpụta site na mbibi na ọnwụ dị ka onye nkọwa ahụ gosipụtara na njedebe. Ọ bụkwa na ezi uche, ntụgharị uche na akụkụ etiti ọ hụrụ site n'èzí yiri ka ọ ga-ajụ akara aka ahụ ọ na-aga n'eziokwu. Nke a gosipụtara akara dị warara nke kewara ịdị ọcha na nzuzu na ndụ Poe na na n'ikpeazụ ehichapụ ya riri ahụ na mmanya.
A pụkwara ikwu na Poe bụ otu n'ime ndị mbụ gbalịrị ịme a usoro nyocha nke uche nzuzu. Thelọ Usher a, yana ọnụ ụlọ ya gbara ọchịchịrị, ọdịdị ya dị egwu ma ọ bụ mgbawa ahụ n'etiti etiti ya, ka a na-ewere dịka ụdị Freudian nke ụdị uche ahụ.
Mgbe ugbu a usoro psychoanalytic na oru Poe, ha choro ichota mbelata na akwukwo edemede nke akuko ya. Mana n'otu oge ahụ, ndị nkatọ na-aga n'ihu na-amụ ọrụ ya na-anọgide na-ewere ya a onye ọsụ ụzọ na ihe omimi, onye nyocha banyere uche mmadụ na onye ọrụ edemede.
N'ọnọdụ ọ bụla ihe doro anya bụ na akụkọ ha ka na-echeta dị ka ihe atụ nke ịchọ ihe omimi na atụmanya ụjọ nke ụmụ mmadụ rụrụ.
Akụkụ nke Bibliography eji mgbe ahụ:
E. Ọla, Ihe ngosi Dictionary, Labour, Barcelona, ​​1988.
Norton Anthology nke akwukwo ndi America, New York, 1989.
Poe Unknow, akwụkwọ akụkọ EA Poe, Akwụkwọ Akwụkwọ ọkụ, San Francisco, 1980.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Symbology na psychoanalysis na Poe's Fall of House of Usher
Ndewo, a ga m arụ ọrụ na ọrụ a ma enwere ajụjụ abụọ m na-enweghị ike ịza. Ndị a bụ: Gịnị ka Usher chọrọ ka enyi ya hụ? Achọrọ m ịmata ihe ndị na-egosi ịhụnanya maka ịkọwa ha site na ederede ederede ... Enwere m obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka!
Maria Florence dijo
ọnwa dị mma nke ukwuu iji mee monograph
Zaghachi Maria Florence
Lucia Sánchez dijo
Uld nwere ike ịgwa anyị, gịnị ka Usher na-eche gbasara ụlọ o bi na ya?
Zaghachi lucía Sánchez
Kedụ ka ọ ga -esi kwe omume na n'edemede nkuzi dị otu a gbasara akwụkwọ anyị ga -ahụ ka enweghị '' onye na -adịchaghị '' pụtara, kama nke ziri ezi '' opekata mpe ''? Nke a bụ otu esi ekwu ya mgbe ọ nwere ihe pụtara "opekata mpe", "opekata mpe", "opekata mpe", opekata mpe "... , obere m nwere ike ịnagide mmejọ "; "Ka ị na -aga, ka ị ga -alaghachi."
Zaghachi Maria Teresa
Maria Frisa. Ajụjụ 10 maka onye edemede nke Lekọta m.
Camilo José Cela. Ezinụlọ Pascual Duarte na ahịrịokwu iri na abụọ